ကြေးနီ Shot / ကြေးနီဖြတ်ကြေးနန်း Shot - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း Bosun ပွန်းစားခြင်း
ကြေးနီ Shot / ကြေးနီဖြတ်ကြေးနန်း Shot
လူမီနီယမ် Shot / လူမီနီယမ်ဖြတ်ကြေးနန်း Shot
ဇင့် Shot / သွပ်ဖြတ်ကြေးနန်း Shot
ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ PDF ဖိုင်ဒေါင်းလုပ်
ကြေးနီရိုက်ချက်ဖြတ်တောက်, မဲနှိုက်ခုံတန်းရှည်၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဖွဲ့နှင့်အေးစက်စသည်တို့ .. နှင့်ရွှေ-ရောင်ခြည်များနှင့်လုံးပုတီး၏အသွင်အပြင်နှင့်အတူနေသည်။ ထိုသူတို့ကအဓိကအားစသည်တို့ကို, polishing အားပေး Sub-အလင်းရောင်နှင့်အဆို့ရှင်, ပစ္စည်း fittings နှင့်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းအပေါ်မျက်နှာပြင် adorning အတွက်အသုံးပြုပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီယက်အိတ်ထုပ်ပိုး, တစ်တန်အိတ်ထုပ်ပိုး, သစ်သားဗန်းထုပ်ပိုး, ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးနှင့်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီတူသောထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အသစ်အဟောင်းသံမဏိပြင်ပမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး, descaling များအတွက် 1. ခိုင်ခံ့
တဲ့ wear-ခံနိုင်ရည်အခင်းစုစုပေါင်းအမျှ 2. မာကြမ်းပြင်ကြွေပြားများဟာစတုရန်း, ကားဂိုဒေါင်နှင့်အခြား Non-စလစ်ကြမ်းပြင်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏နိုင်ပါတယ်
တန်ပြန်သဲများအတွက် 3. ထိုကဲ့သို့သော ဘိလပ်မြေစက်ရုံများအဖြစ်။
မိုးပြာရောင်မှုန်ရေမွှားအမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက်သင့်လျော်သောဒဏ်ငွေအပြောင်းအလဲနဲ့အပြီးတဆင့် 4. နှင့်ထို့ထက် ပို. ခေတ်မီအသုံးပြုမှုကိုလေပေါ်မှာပ။
5. ပွန်းပစ္စည်း (သဲ, ခဲယဉ်းပွန်းစားစက္ကူ, ကော်ဖတ်, emery အထည်)
သတ္တုသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းအတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့; တိကျသတ္တုများပုံသွန်း; ဟာ့ဒ်ဝဲစက်ပစ္စည်းကုန်ထုတ်လုပ်မှု; အော်တိုကိရိယာနှင့်အဆို့ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်ဒါပေါ်တွင်သန့်ရှင်းရေး derusting, ပြင်းထန်လာ, ချောချောမောမောနဲ့ပေါ်လာ။
နောက်တစ်ခု: White ကလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်
ဘစ်စမတ် ရောင်းရန် shot
ကြေးနီ Slag 1-5